Hoggaamiyaha Ahlusunna ” Waa inaan markale hubkeena lasoo baxnaa “ - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
February 14, 2020 10:04 AM - Written by Warbaahinta AlloolNews BO
Hoggaamiyaha Guud ee Ururka Ahlusunna Wal-Jamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa sheegay in waxa haatan ka socda deegaannada Galmudug aysan aheyn wax loo dul qaadan karo.
Isaga oo qaar kamid ah taageerayaasha Hoggaanka Ahlusunna kula hadlayay Dhuusmareeb ayuu soo hadal qaaday xayiraad muddo kooban la saarey Qaar kamid ah Odayaal iyo Waxgarad kasoo baxey Guriceel kuna wajahnaa Dhuusamareeb,waxaana uu sheegay in hadii ay hub wadan lahaayeen aan la celiyeen.
Hadalka Hoggaamiyaha Guud ee Ururka Ahlusunna Wal-Jamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli uu jiro khilaaf xoogan oo kala dhaxeeyo Dowladda federaalka,kaas oo ka dhashay doorashadii ka dhacdey Dhuusamareeb.
DEG DEG;- Goodax Barre oo Amar ku soo rogey Maamulo ay ku jirto Puntland.
Daawo: Sarkaal Bixiyey Sirtii Dalka Aljeriya oo Sirdoonka Turkigu Qabteen
Daawo: Xisbiga wadan oo eedu culus ku hurgufey Badhisaabka Maroodijeex
Cali geedi ” doorashadu waa in wakhtigeeda ku dhacdo.
Gudoomiye ciro oo xubno cusub magacaabay.